Cumin | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Cumin abụghị ihe a na-erekarị na mba anyị, ma onye ọ bụla maara ihe ụtọ nke ose a. Na nri, naanị mkpụrụ nke osisi a na-eji. Taa, anyị na-ele cumin anya, na ọgwụ ọgwụ ya na contraindications. Ihe mejupụtara caraway na ihe oriri na-edozi ahụ Na osisi a, ọtụtụ vitamin. Cumin nwere ọtụtụ ígwè, phosphorus na calcium.
Cumin na dill otu ihe ahụ?
E nwere osisi dịka ibe ha dị ka mmiri abụọ nke mmiri. Na iji ghara ichegharị ha, ị kwesịrị ịma nke ọma otú ha si ele anya na otú ha si dị iche. Nke a dị iche iche na-agụnye abụọ nkịtị ngwa nri - dil na cumin. Nkọwa na njirimara nke osisi N'agbanyeghị ụdị ihe yiri osisi, ịmata ọdịiche ha dị mfe.
Atụmatụ nke iji oji cumin cine na cosmetology
Mbụ a kpọtụrụ aha ngwọta nke mmanụ cumin cumin pụtara puku afọ ole na ole gara aga, n'Esia na Middle East. Ọtụtụ ndị dọkịta na ndị nchọpụta (Hippocrates, Avicenna, Dioscorides) kwuru banyere ya na ihe odide ha. Isiokwu ahụ ga-agwa gị otu esi etinye mmanụ ahụ n'ọrụ, ga-ewebata atụmatụ nke iji ngwaahịa a eme ihe maka ịchọ mma akpụkpọ anụ na mkpochapu ezughị okè.
Akụkụ nke mmetụta nke cumin na afọ na eriri afọ
Cumin - osisi pụrụ iche, nke a maara dị ka ose, na-eji ọ bụghị naanị na ntụ ọka, ma dịka onye na-agwọ ọgwụ maka ọrịa ndị na-arịa ọrịa gastrointestinal. Banyere uru ya bara uru na aru na iwu nke ngwa ga-atụle n'okpuru ebe a. Ihe gbasara botanical nke osisi cumin bụ ezigbo biennial ma ọ bụ ogologo oge nke òtù ezinụlọ ahụ.
Atụmatụ nke iji oji cumin cine na oncology
Mkpụrụ nke cumin cine maka ọtụtụ narị afọ na-eji dị ka ihe esi nri. Ma, na mgbakwunye, mmanụ nke sitere n'aka ha nwere ihe ngwọta dị iche iche a na-eji agwọ ọrịa, gụnyere ịgwọ ọrịa cancer. Gụkwuo banyere nke a - na ihe onwunwe anyị. Ihe omumu nke a na - agwakota bu ihe ndi choputara acho acids, phospholipids, amino acids (8 n'ime ha di mkpa), carotenoids, vitamin E, D, C, otu B, mineral (potassium, sodium, phosphorus, calcium, manganese, ígwè, zinc, ọla kọpa, selenium, nickel, wdg.
A na-ejikarị cumin na-eme ihe maka ihe ndị e ji esi nri, na-arụ ọrụ dị ka ihe ose, ma anaghị elelị ihe ndị na-agwọ ọrịa nke osisi ahụ, karịsịa na njikọta ndị ọzọ bara uru. Otu n'ime ihe ndị kachasị mma nke osisi ma ọ bụ mmanụ cumin cine bụ mmanụ aṅụ, nke n'onwe ya bụ ụlọ nkwakọba ihe ndị bara uru.
Atụmatụ nke iji oji cumin cumin na pancreatitis
E nwere ihe dị ka ụdị iri atọ nke ụdị ihe a dị mkpa n'ụwa, 10 n'ime ha nwere ike ịchọta na Russia. Na mba anyi, a na-akpọ cumin ka coriander ojii, ọka ma ọ bụ Kalindzhi. Debe ya ọ bụghị naanị n'ụdị mkpụrụ maka efere dị iche iche, ma mee ya mmanụ, nke bụ ihe mgbakwunye dị ndụ nke bara uru bụ nke nwere ike inyere aka imeri ọtụtụ ọrịa.
Njirimara ngwọta nke mmanụ cumin cumin maka ndị ikom
Cumin Black - osisi bara ezigbo uru nke bara uru n'inweta vitamin, mineral na ogige ndị ọzọ nọ n'ọrụ. Mmanụ sitere na ya nwere ike ime ka ahụ ike ụmụ nwoke. N'isiokwu a anyị na-atụle uru ndị dị mkpa na nsogbu nke cumin ojii na prostate na nsogbu ndị ọzọ na-enwe mmekọrịta chiri anya na ụmụ nwoke.
Akụkụ nke iji cumin cumin n'oge ime ime
Ụmụ nwanyị ndị na-echere ọmụmụ nwa ha na-elebara ahụike ha anya na ịhọrọ ihe oriri ha. Karịsịa, ọ ga-adị mma ka ị mara onwe gị na esi eji ose dị ụtọ dị ka cumin cumin n'oge afọ ime, na ihe ndị a ga-eme.
Ojiji nke cumin iji mee ka umuaka na-aga n'ihu mgbe ị na-ara nwa
N'iji ọgwụgwọ ọzọ, a na-ewere cumin dị ka ụzọ kachasị dị irè iji mụbaa lactation n'oge ị na-enye nwa. Isiokwu a ga-atụle otú e si akwadebe ma were ngwaọrụ ndị a kọwara kpọmkwem nye ndị nne na-eto eto, yana àgwà banyere ya na nkà mmụta ọgwụ. Nkọwa na ngwongwo nke osisi caraway Cumin - ihe si esi Eurasia.